Our warshad waa qof ku taqasustay wax soo saarka iyo iibinta carbon saxan fiber, carbon waxyaabaha fiber wax taaj oo kale, tuubooyinka fiber carbon, CNC aluminium daawaha qaybo sax sare, carbon qaybo processing fiber CNC, diyaaradaha aan la saarnayn fiber carbon, qaybo daawaha aluminium, waxyaabaha fiber carbon qaabeeya, carbon processing CNC, dhammaan noocyada kala duwan ee hardware iyo korontada qaybo processing madhxiya.
waxyaabaha waxaa inta badan loo isticmaalaa in qaybo ka mid sax ah qalabka qalabaynta, qaybo diyaaradaha aan la saarnayn, mab UAV drone, noocyada baabuurta, farsamada gacanta fiber carbon, qaybo ka fiber carbon qaabeeya, accessories fiber carbon, firirka farsamo, qalab isboorti, decoration dusha, korontada, makiinadaha iyo korontada hardware iyo industries.We kale korontada codsatay laba shatiyada la alifay iyo 16 shatiyada technology cusub iyo 4 muuqashada shatiyada ilaa 2018 waxaana uu horey u helay 20 shatiyada oo helay shahaado patent ah, halka aynu ka codsatay a shirkadaha teknoolojiyad sare ee qaranka.
La asaasay April 2008, Shirkadda go'an in aan horumarino khadadka-soo-saarka fiber carbon products.Two tayo sare leh la furay horumarinta geedi socodka of qodista, wax taaj oo kale, processing CNC.
goobta wax soo saarka ayaa waxaa kor u kacay 800 mitir oo laba jibbaaran, tayada wax soo saarka ayaa la si weyn u soo hagaagtay, waxaan bilaabay in mass soo saaraan wax fiber carbon gaar ah FPV.
Factory loo soo wareejiyay Gaobu Town, Dongguan, Guangdong ee sanadkan, goobta wax soo saarka gaadhay 2500 mitir oo laba jibbaaran, qalabka muusikada ka badan 10 sax iyo injineerada farsamo ku filan lagu daray si loo hagaajiyo hannaanka. Ilaa hadda, waxaa jiray 4 khadadka-soo-saarka oo baaxad weyn oo ay ka mid yihiin sheet carbon fiber, tube carbon fiber, processing CNC iyo farsamada.
Our alaabta ansixiyey ISO-9001-2008 nidaamka Tayada shahaado, tayada wax soo saarka ayaa la casriyeeyay, heerka fiican gaadhay 99%.
Waxaan ka qaybgalay 13aad Shanghai International Model Exhibition, oo waxaa lagu sharfay horyaalka ee 2015 TOP 10 shirkadood sannadlaha ah si fiican u yaqaan.
Waaxda Arrimaha Dibedda, Ganacsiga ahaa aasaaska, oo aan helay 4 patent iyo alaabooyinka ee carbon soo saarka fiber product.Our waxaa laga dhoofiyey in ka badan 20 dal oo dunida ah.
Waxaan ku guuleysanay sanadlaha TOP 20 ganacsi ee warshadaha wax cusub in hawlaha wax xulasho wanaagsan ee Shiinaha.
Waxaan ka qaybgalay EXPO hiwaayad 19 Shiinaha , model ugu weyn oo ugu saameynta badan Asia Pacific ee xirfadle event.There ahaayeen ku dhowaad 60,000 oo martida ku Bandhiga saddex maalmood ah, iyo wax soo saarka fiber carbon soo jiitay iibsadayaasha xirfadeed iyo aad u badan.
Waxaan samayn karaa noocyo kala duwan oo ka mid ah waxyaabaha fiber carbon baahida sare, wax soo saarka sare standards.Personalized cut CNC sida ay macaamiisha ee drawings.We dalab la xirrira, shiidi doona, qoditaanka, CNC processing adeegga one-stop.
Annagu waannu addeeci "tayada ugu horeysay, adeeg-u janjeedha, qiimaha macquulka ah," leh tayo sare leh, hufan, adeeg dhakhso ah in la dhiso iskaashi muddo dheer la customers.Continuing kasta si loo hagaajiyo alaabta iyo adeegyadayada, sii leh macaamiisha iyo gaaraan guul Annaga iyo macaamiisha u dhexeeya.